PIED ရှိရင်ဘယ်လိုသိမှာလဲ။ (Reddit post) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
ငါ၏အ ED porn-related လျှင်အဘယ်သို့ငါသိနိုင်မည်လဲ? (စမ်းသပ်ခြင်း)
သငျသညျ PIED ရှိပါကသင်ဘယ်လိုသိရသလဲ (Reddit ပို့စ်)
ငါမင်းရဲ့ Brain on Porn စာအုပ်ကိုငါဖတ်နေတယ်။ ဒါကမင်းကညစ်ညမ်းရောဂါခံစားနေရတာလား PIED ခံစားနေရတာဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးဖို့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးပါ။ ဒီတော့ဒီမှာသွား:
ထို့နောက်တစ်ကြိမ်တွင်သင်အကြိုက်ဆုံး porn ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (သို့မဟုတ်သင်ကျိန်ဆိုမိလျှင်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ) ။
ထို့နောက်အခြားအခါသမယတွင်အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းနဲ့ porn နှင့် ပတ်သက်. ကူးယဉျမပါဘဲ masturbate ။
ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးမလုပ်ပေမဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်နေတုန်းမှာငါစိုက်ထူခံရတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည် porn မပါဘဲစိုက်ထူရနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိုအကြောင်းကိုစိတ်ကူးယဉ်နိုင်ဘူး။ ငါသည်ငါ့ဆန္ဒအပေါ်စိုက်ထူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ (ငါရုတ်တရက်ဆုကြေးဇူးများနှင့်တိုက်တွန်းမှုများကိုရပေမယ့်သူတို့ကမလိုချင်တဲ့ကြောင့်ဤအရာတို့ကိုမရေတွက်) ။ ဒါကြောင့်ငါ PIED ခံစားနေရပြီးပါ၏
လောလောဆယ်ငါသည်ငါ၏တစ်နေ့တာ 64 အပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကို, ငါသညျဤပြဿနာကိုပယ်ရှားတတ်ကြောင်းမျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် YBoP စာအုပ်မှာ PMO ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီတော့ငါထင်ထားတာကအစောပိုင်းသန္ဓေတည်ခြင်းသို့မဟုတ်လိင်ဆက်ဆံစဉ်သို့မဟုတ်အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံစဉ်နှိုးဆော်ခြင်းမခံရခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ငါမလိင်ဆက်ဆံရသေးပေမဲ့နောင်လာမယ့်အနာဂတ်မှာငါ NoFap ကြောင့်ဒီပြproblemsနာတွေပေါ်ပေါက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီး porn ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုသတိပြုမိရန်ကျွန်ုပ်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဦး / xNovaz ဤစာအုပ်ကိုဖို့ကျွန်မကိုမိတ်ဆက်သည်။
LINK - ငါတိုင်း PMO စှဲလမျးသူ (ကျွန်တော်တို့) porn-သွေးဆောင်-erectile-ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိပါတယ်ခန့်မှန်း